Uhlaziyo olutsha lweNASA ngokuQaliswa kunye nokuDocking kwe-SpaceX Crew-3 Mission
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Uhlaziyo olutsha lweNASA ngokuQaliswa kunye nokuDocking kwe-SpaceX Crew-3 Mission
I-NASA ihlaziya ingxelo yayo yophehlelelo oluzayo kunye nemisebenzi yokumisa i-arhente ye-SpaceX Crew-3 yemishini kunye noosomajukujuku kwiSikhululo saMajukujuku saMazwe ngaMazwe. Le yimishini yesithathu yokujikeleza kunye noosomajukujuku kwisiphekepheke se-SpaceX Crew Dragon kunye nenqwelomoya yesine enoosomajukujuku, kuquka ne-Demo-2 yokubhabha yovavanyo, njengenxalenye yeNkqubo ye-Commercial Crew ye-arhente.
Ukuqaliswa ngoku kujoliswe ngo-1:10 am EDT ngoLwesithathu, ngoNovemba 3, kwi-rocket ye-SpaceX Falcon 9 ukusuka kwi-Launch Complex 39A kwi-NASA ye-Kennedy Space Centre eFlorida, ngenxa yesimo sezulu esibi soqikelelo lwemozulu ecaleni kwendlela yenqwelomoya ngeCawa, Oct. 31, umzamo wokuqalisa.
Iimeko zemozulu ecaleni kwepaseji yokunyuka kulindeleke ukuba ziphucuke ngolwesiThathu, ngoNovemba wesi-3, ukuqaliswa, kunye noqikelelo lwe-45th Weather Squadron luqikelela amathuba angama-80% eemeko zemozulu ezilungileyo kwindawo yokuphehlelelwa.
Oosomajukujuku beNASA be-SpaceX Crew-3 baya kuhlala kwindawo yabasebenzi eKennedy de baqaliswe. Baza kuchitha ixesha kunye neentsapho zabo kwaye bafumane amagqabantshintshi ngobugcisa kunye nemozulu kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
I-Crew Dragon Endurance icwangciselwe ukumisa kwisikhululo sasemajukujukwini ngentsimbi ye-11 ngokuhlwa ngolwesiThathu, ngoNovemba wesi-3. Ukuphehlelela kunye ne-docking coverage iya kuboniswa ngqo kwi-NASA Television, i-NASA app, kunye newebhusayithi ye-arhente.
Indiza yeCrew-3 iya kuthwala oosomajukujuku beNASA uRaja Chari, umphathi wemishini; UTom Marshburn, umqhubi wenqwelomoya; kunye noKayla Barron, ingcali yobuthunywa; kunye ne-ESA (i-Arhente yeSithuba saseYurophu) usomajukujuku u-Matthias Maurer, oza kusebenza njengengcali yobuthunywa, kwisikhululo sasemajukujukwini kwimishini yenzululwazi yeenyanga ezintandathu, ehleli ngaphakathi kude kube sekupheleni kuka-Epreli wama-2022.
Umsebenzi weCrew-2 kunye nosomajukujuku beNASA uShane Kimbrough kunye noMegan McArthur, iJAXA (iArhente yokuHlola iAerospace yaseJapan) usomajukujuku uAkihiko Hoshide, kunye nosomajukujuku we-ESA (i-Arhente yaseYurophu) uThomas Pesquet ngoku baya kujolisa ekuyekisweni kwabo kwisikhululo sasemajukujukwini ngaphambi kweCawa, NgoNovemba 7, ukubuyela eMhlabeni.
Ixesha elisikiweyo lidlulile lokuvunywa kwamajelo eendaba ukuze kubhengezwe umntu ngokwalo kolu phehlelelo. Ngenxa yobhubhani we-coronavirus (COVID-19) oqhubekayo, izibonelelo zeKennedy Press Site zihlala zivaliwe ukuze kukhuselwe abasebenzi baseKennedy kunye neentatheli ngaphandle kwenani eliqingqiweyo lamajelo eendaba asele azisiwe. Ulwazi oluthe vetshe malunga nokuvunywa kwemithombo yeendaba luyafumaneka ngokuthumela i-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
I-NASA ye-SpaceX Crew-3 yokugubungela umsebenzi ngolu hlobo lulandelayo (onke amaxesha aseMpuma):
NgoLwesibini, eyeNkanga 2
• 8:45 pm – I-NASA TV iqala ukuvezwa ngokusesikweni. I-NASA iya kuba ne-inshorensi eqhubekayo, kubandakanya ukuqaliswa, ukumisa i-docking, i-hatch open, kunye nomsitho wokwamkela.
NgoLwesithathu, ngoNovemba 3
• 1:10 am – Qalisa
Usasazo lweTV yeNASA iyaqhubeka ngokufika, ukufika, kunye nomsitho wokwamkela. Endaweni yenkomfa yeendaba eyandisiweyo, ubunkokheli beNASA buza kunika izimvo ngexesha losasazo.
• Intsimbi ye-11 emva kwemini
NgoLwesine, ngoNovemba 4
• 12:35 am – Ukuvula iHatch
• 1:10 am – uMnyhadala woKwamkeleka
Ukuqaliswa kweNASA yeTV
Umboniso weNASA kamabonakude obukhoma uya kuqala ngo-8:45 pm ngoLwesibini, ngoNovemba 2. Kwi-NASA TV yehlisa ulwazi, iishedyuli, kunye namakhonkco okusasaza ividiyo ku-nasa.gov/live.
Umsindo kuphela wenkomfa yeendaba kunye nokwazisa ngokusasazwa kuya kwenziwa kwiisekethe ze-NASA "V", ezinokufikelelwa ngokufowunela u-321-867-1220, -1240, -1260 okanye -7135. Ngomhla wokumiliselwa, "i-audio audio," imisebenzi yokubala ngaphandle kwe-NASA ye-TV, iya kuqhutywa ngo-321-867-7135.
Uphehlelelo nalo luya kufumaneka kumaza osasazo asekuhlaleni e-VHF angamateur 146.940 MHz kunye neefrikhwensi zikanomathotholo ze-UHF 444.925 MHz, imowudi ye-FM, eviwe ngaphakathi kweBrevard County kuNxweme lweSikhathi.
Ukufunyanwa kweNASA kwiWebhusayithi
Ukubhengezwa kosuku lwe-NASA's SpaceX Crew-3 mission iya kufumaneka kwiwebhusayithi ye-arhente. I-coverage iya kubandakanya ukusasazwa bukhoma kunye nohlaziyo lweblogi oluqala ngaphambi kwe-10 pm ngoLwesibini, ngoNovemba 2, njengoko i-countdown milestones isenzeka. Ividiyo efunwayo yokusasazwa kunye neefoto zophehlelelo ziya kufumaneka kwakamsinya emva kokuphakanyiswa. Ngemibuzo malunga nokubala, qhagamshelana negumbi leendaba laseKennedy ku: 321-867-2468. Landela i-countdown coverage kwibhlog yokusungulwa kwiblogs.nasa.gov/commercialcrew.
Ngomhla wokuphehlelelwa, "ukutya okucocekileyo" kokuphehlelelwa ngaphandle kwenkcazo yeTV yeNASA iya kusasazwa kwijelo leendaba zeNASA. I-NASA iya kubonelela ngevidiyo ephilayo yokutya kweLaunch Complex 39A malunga neeyure ezingama-48 phambi kokuphakanyiswa okucwangcisiweyo kwe-Crew-3 mission. Kusalindelwe imiba yezobugcisa engalindelekanga, isondlo asiyi kuphazamiseka ngokusungulwa.
Nje ukuba isondlo sibukhoma, uya kusifumana ku-youtube.com/kscnewsroom.
Yima kwiLaunch Virtualally
Amalungu oluntu angabhalisela ukuzimasa oku kuphehlelelwa okanye ajoyine umsitho kaFacebook. Inkqubo yeendwendwe ye-NASA yenyani yalo msebenzi ikwabandakanya izixhobo zokuphehlelelwa ezigcinwe, izaziso malunga namathuba ahambelanayo, kunye nesitampu se-NASA yokundwendwela yendwendwe (kwabo babhalisiweyo nge-Eventbrite) emva kosungulo oluyimpumelelo.
Bukela, Zibandakanye kwi-Social Media
Yazisa abantu ukuba ulandela uthumo kuTwitter, kuFacebook, naku-Instagram ngokusebenzisa i-hashtag #Crew3. Ungahlala uqhagamshelene ngokulandela kunye nokuthega ezi akhawunti:
Inkqubo yabasebenzi bezoRhwebo yeNASA inikezele ngeenjongo zayo zothutho olukhuselekileyo, oluthembekileyo, noluneendleko zothutho oluya nokubuya kwiSikhululo saMajukujuku saMazwe ngaMazwe sisuka eUnited States ngentsebenziswano neshishini labucala laseMelika. Le ntsebenziswano iguqula i-arc yembali ye-spaceflight yabantu ngokuvula ukufikelela kwi-orbit ye-Earth ephantsi kunye ne-International Space Station kubantu abaninzi, isayensi eninzi, kunye namathuba orhwebo amaninzi. Isikhululo sasemajukujukwini sihlala sisesichengeni sokutsiba okukhulu okulandelayo kweNASA kuphononongo lwasemajukujukwini, kubandakanya nemishini yexesha elizayo eya eNyangeni kwaye, ekugqibeleni, ukuya kuMars.